GOLAHA WAKIILADA HA LOO DAAYO SHAQADOODA, | Saxil News Network
GOLAHA WAKIILADA HA LOO DAAYO SHAQADOODA,
Xeerka muranka badan dhaliyey Ee baananka maal gashiga ku saabsan Ee horyaala golaha wakiilada waxaan qabaa in loo daayo Golaha wakiilada, goluhuna waajibkiisa ka guto iyagoo ka saaraaya wixii diinteena islaamka ka hor imanaaya.
Dalkani wuu u baahan yahay in ay yimaadaan baanan caalamiya Oo aynu ku hagno dastuurkeena iyo xeerarkeena Kii aan ku gelaynina iska maqnaado Kii ku gelayaana yimaado, SI looga maarmo kuwan iminka xaaraanta inagu haysta Ee DAHABSHIIL IYO SALAMA.
Golaha wakiilada inagaa dooranay inaga ayey wakiil inaga yihiin waxayna wakiil inagaga yihiin danteena. Diinteena iyo dhaqankeena, waxaanu ku kalsoonahay golaha wakiiladu inaanu ka gudbayn Wixii ay wakiilka ummadan kaga ahaayeen.
Waxaan ugu baaqayaa shirkadaha dabada ka riixaaya kacdoonka la doonaayo in lagu laalo guud ahaan xeerka Oo dhan SI aan baanan kale dalka iman in ay dalka iyo dadka ka daayan kootada ay ku xidheen Ee ay dhiiga kaga miiranayaan hana ogolaadaan in si xalaala loola tartamo.
axay ila tahay in laysla saxo xeerka Oo Wixii diiniyan xaaran ah laga saaro lana Waa fajiyo dastuurkeena iyo diinteena, lamase aqbali karaayo guud ahaan xeerka ha lalaalo Oo macnaheedu yahay dalka yaan baan kale iman waana sida ay rabaan qolyahaas aan kor ku soo sheegay,